J/Hoose-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar Kale-Soo-Bandhigay Ciidamo Cusub!!…Warbixin & Sawirro… | Allkisima.com
J/Hoose-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar Kale-Soo-Bandhigay Ciidamo Cusub!!…Warbixin & Sawirro…
Allkisima_Phot's-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar-Kale Soo Bandhigay Ciidamo Cusub-1-JPG.
Jamaame🙁Allkisima)-Ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay ku dhawaad 50 dhalinyaro ah kuwaas oo ay ku sheegtay inay hore kaga tirsanaayeen ciidmada dowlada Soomaaliya balse ay haatan dhankooda kusoo biireen.
Raggan ay al-shabaab soo badhigeen ayay ku sheegeen inay barteebn Cilmiga , waxaana ay ka shaqeyn doonaan qeybta tashkiilka ama askareynta dhalinyarada aan al-shabaab ka tirsaneyn si ururka ay ugu biiraan.
Allkisima_Phot's-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar-Kale Soo Bandhigay Ciidamo Cusub-2-JPG.
Allkisima_Phot's-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar-Kale Soo Bandhigay Ciidamo Cusub-3-JPG.
Allkisima_Phot's-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar-Kale Soo Bandhigay Ciidamo Cusub-4-JPG.
Allkisima_Phot's-Hor-joogayaasha Al-shabaab Oo Mar-Kale Soo Bandhigay Ciidamo Cusub-5-JPG.
Horjoogayaasha Al-shabaab ayaa goob fagaaro ah oo ku taal degmada jamaame kusoo bandhigay ragaan oo tiro ahaan gaaraya 46 dhalinyaro ah, waxaana munaasabadii ragas lagu soo bandhigay joogay saraakiil sar sare oo ka tirsan al-shabaab .
Allkisima_Phot's-Hor-Joogayaasha Al-shabaab-Oo Mar Kale Ciidamo Cusub Soo Bandhigay-6-JPG.
Hor-joogayaasha al-shabaab waxay sheegeen in ragan dhamaantood ay markii hore kasoo horjeedeen al-shabaab balse markii dambe si iskood ah ay ugu biireen isla markaana ay diyaar u yihiin inay kasoo hor jeestaa Ciidamada dowlada oo markii hore ay ka tirsanaayeen .
Ugu dambeyntiina Hor-joogayaasha Al-shabaab ayaa marar badan sidaan oo kale usoo badhandhigay rag ay ku sheegeen inay hore dowlada kaga tirsanaan jireen oo ay isa-soo dhiibeen.